Ethereum 2.0 के हो र यो किन यत्तिको महत्त्वपूर्ण छ - काजु
Ethereum 2.0 के हो र किन यो यत्तिको महत्त्वपूर्ण छ
घर » घर » Ethereum 2.0 के हो र किन यो यत्तिको महत्त्वपूर्ण छ
ट्याग: ethereum, 2.0 ईथरम, इथरियम भर्चुअल मेसिन (EVM), Ethereum WebAsorses (EWASM), स्टेक को प्रमाण, स्केलेबिलिटी, Vitalik बिरिन
२०१ 2015 मा हुँदा इथरियम मुख्य नेटमा प्रवेश गरिएको छ, विकासकर्ताको विश्वको ठूलो अंशको रुचि र उत्साह जगायो, र अवश्य पनि लगानीकर्ताहरू। तिनीहरूको अपेक्षाहरू केही हदसम्म नरम हुनुपर्‍यो किनभने स्केलेबिलिटी र सुरक्षा मुद्दाहरू प्रोटोकलमा देखा पर्न थाले। कोडमा सुधारहरू गरियो, र विकास कहिले पनि बन्द भएन, तर यो छिट्टै नै स्पष्ट भयो कि भविष्यमा प्रतिस्पर्धी हुन इथरियमलाई पूर्ण ओभरल आवश्यक छ। भविष्यमा पूरा गर्नका लागि: यस प्रकार इथरियम २.० जन्मिएको थियो, यसको "कोड" नाम सेरेनिटीको साथ।
सबैलाई नमस्कार सुन्दर र कुरूप। यदि यो तपाईको पहिलो पटक यहाँ आउँदैछ भने तपाईलाई स्वागत छ।
यहाँ काजुमा हामी क्रिप्टोकरन्सीहरूको विशाल संसारको सब भन्दा चाखलाग्दो प्रोजेक्टहरू वर्णन गर्दछौं, मूल्य र सुविधाहरूको विश्लेषण गर्दछौं, ट्रेडिंगको आधारभूत कुरा पत्ता लगाउँदछौं र ब्लकचेनमा उन्नत प्राविधिक विश्लेषण गर्दछौं। संक्षेपमा, त्यहाँ सबै स्वादहरूको लागि केहि छ।
काजु एउटा पुस्तक, डायरी हो, नोटहरूको मोल्स्काइन जसले मलाई मेरो अनुसन्धान याद राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ। मैले वेबमा गरेँ, सार्वजनिक रूपमा, किनकि मैले जे सिकेको थिएँ मैले भर्खरै वेबमा मात्र सिकेको छु र वेबमा आशामा यसलाई फिर्ता बोकेर लैजान्छु कि तपाईंले पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यसले गर्छ भने म यस बारे खुसी छु।
Ethereum २.० के हो हेरौं र सबै रोचक विवरणहरू फेला पारौं।
के तपाईं पहिले नै Ethereum खरीद गर्न चाहानुहुन्छ? यदि तपाइँ Binance मा यो गर्नुहुन्छ, प्रयोग गर्नुहोस् यो रेफरल लिंक: तपाईंसँग सब भन्दा धेरै छुट छ, २०%, सबै आयोगमा, प्रति सेम्पर!
Ethereum 2.0 को संक्षिप्त विवरण
Ethereum को समस्याहरू, जुन Ethereum 2.0 समाधान गर्न चाहन्छ
Ethereum 2.0 को साथ के परिवर्तन हुन्छ?
चरण ०: दांव र बिकन चेनको प्रमाण
चरण १: साझेदारी गर्दै
चरण २: मर्जर
Ethereum २.० अपडेटको साथ मूल्यमा असर
Ethereum 2.0 सेरेनिटी, Preston भ्यान Loon द्वारा वर्णन गरे अनुसार, वर्तमान Ethereum हामीलाई थाहा छ भन्दा फरक blockchain हो। आफैंमा यो एक इथरियम अपग्रेड हो, जुन यद्यपि यसको हार्ड हार्ड फोर्क आवश्यक पर्दैन मूल श्रृंखला
प्रेस्टन भ्यान लून - Prysmat Labs Co-संस्थापक, Ethereum प्रोटोकल डेवलप
तपाईं कसरी Ethereum २.० पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ? निक्षेप गरिनेछ एक-बन्द पुरानो देखि स्मार्ट श्रृंखला मा नयाँ श्रृंखला गर्न ईथर को। यो एक तर्फी लेनदेन हुनेछ, पछि लिगेसी Ethereum प्रणाली को उपयोग बन्द हुनु पर्छ।
मैले सुरूमा भनेझैं एथरियमले पहिले नै केहि अपडेटहरू गरिसकेको छ जसको कारणले यो कम भीडभाड र अधिक स्केलेबल हुन पुग्दछ, ठीक त्यस्तै इथरियम २.० को रिलीज हुने प्रत्याशामा। यी परिवर्तनहरूका शानदार नामहरू छन्: होमस्टेड मार्च २०१,, मेट्रोपोलिस बाइजान्टियम अक्टुबर २०१ 2.0, मेट्रोपोलिस कन्स्टान्टिनोपल फेब्रुअरी २०१ 2016, र इस्तानबुल दिसंबर २०१ 2017।
हामी परिवर्तनको पछाडि कारण बुझ्दछौं: वर्तमान डिजाइनसँग धेरै भन्दा धेरै सीमितताहरू छन्। एल्गोरिथ्म कामको प्रमाण र वास्तुकलाको अन्य भागहरू विकासकर्ताको मागको सामना गर्न कहिल्यै सक्षम भएनन्।
केहि मुख्य समस्याहरू हुन्:
स्केलेबिलिटी: यो एक ज्ञात तथ्य हो कि विश्व कम्प्युटर (बुटरिन र उनको ईथरियम निर्माणको मुख्य फोकस) ढिलो छ। अहिले, प्रोटोकल सबै विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगहरू (DAPPS) र यसमा वरिपरि चलिरहेको स्मार्ट सम्झौता द्वारा अभिभूत छ। यस मोर्चामा केहि सुधारहरू गरियो, तर यो स्पष्ट भयो कि कार्य ब्लकचेनको प्रमाणले मागको सामना गर्न सक्दैन।
सुरक्षाईथरियममा कुनै खास सुरक्षा उल्ल bre्घन भएको छैन, तर केहि सुधारहरू सम्पूर्ण प्रणालीको स्वास्थ्यलाई फाइदाको रूपमा चिनिन्छ। यो Ethereum २.० का लागि लक्ष्य हो, जुन अधिक मजबूत प्लेटफर्म सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्दछ।
नयाँ भर्चुअल मेसिन: Ethereum को एक महान आविष्कार एक भर्चुअल मेसिन को रिलीज थियो। यो त्यस्तो अंश हो जुन स्मार्ट सम्झौताहरू चालु गर्दछ र प्रोटोकल एक विश्वव्यापी कम्प्युटर बनाउँछ। समस्या यो हो कि यो अंश पनि धेरै सुस्त छ। यो एक ठूलो समस्या हो किनभने Ethereum मा प्रत्येक लेनदेन नेटवर्क को वैश्विक स्थिति अपडेट गर्दछ। अहिले, ईभीएम (Ethereum भर्चुअल मेसिन) प्रणालीमा एक अड़चन हो।
एक पटक Ethereum १.० को समस्या रेखांकित गरिसकेपछि, हामी Ethereum २.० ले के सुधार ल्याउँछ भनेर हेर्न सक्दछौं। ध्यानमा राख्नुहोस् कि यी सुधार योजनाहरूको एक धेरै उन्नत चरणमा छन्, वास्तविक विकास, आंशिक रूपमा शुरू गरिसक्यो, अझै आउन बाँकी छ।
स्टेक को प्रमाण: प्रूफ-अफ-स्टेक सहमति एल्गोरिथ्म सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन हो ईथरम २.० को साथ आउने। यो संयन्त्र प्रयोग गर्दछ वैधताको मापनको रूपमा बिजुलीको सट्टा हिस्सेदारी.
कार्य blockchain को एक प्रमाण मा, संग श्रृंखलाह्याश पावर उच्च राम्रो।
स्ट्याक blockchain को एक प्रमाण मा, अधिक संसाधनहरु को साथ चेन जोखिममा यो सबै भन्दा राम्रो हो।
यसबाहेक, वैधकर्ताहरू नयाँ स्रोत हुन्छन् र पनि ब्लक प्रचारकहरू। यी ती प्रयोगकर्ताहरू हुन् जसले कम से कम E२ ETH करार बाँधेका छन्। यी स्रोतहरू स्ट्याकि .ले अर्को ब्लकको सिर्जनाकर्ताको रूपमा चयन गर्न वैधकर्तालाई लटरी प्रविष्ट गर्न अनुमति दिन्छ र यसरी उसले आफ्नो पुरस्कार दावी गर्न सक्षम हुनेछ। यदि एक मान्यकर्ता अफलाईनमा जान्छ वा बेइमान भएर कार्य गर्दछ जब यो नेटवर्कको एक सक्रिय भाग हो, केही वा सबै ईथर एक वैधकर्ता बन्न प्रयोग गरिन्छ यसबाट हटाइनेछ।
Shardingप्रणाली मा अर्को ठूलो परिवर्तन पक्ष चेन को रूप मा चिनिन्छ को उपयोग हो तीव्र। पहिले मैले भने कि लेनदेनको ढिलोपना, नेटवर्कको भीड, वर्तमान प्रणालीको प्रमुख समस्याहरू मध्ये एक हो। यसको अवस्थित वास्तुकलामा यस्तो देखिन्छ कि त्यहाँ कुनै निश्चित समाधान छैन। यस कारणका लागि, छुट्टै साना चेनहरू (शार्डहरू) सिर्जना गर्ने जुन व्यक्तिगत ट्रेडसँग कारोबार गर्न सक्दछन् एक शानदार विचार र महत्वपूर्ण सुधार हो। पोल्काडोटले यो गरिरहेकी छ जब ऊ जन्मेको थियो।
Ethereum २.० रोडम्याप के हो?
Ethereum १.० लाई जस्तै, Ethereum २.० पनि चार चरणहरूमा सुरूवात हुनेछ:
चरण ०: नयाँ प्रूफ-अफ-हिस्सेदारी प्रणालीको सुरुवात (क्यास्पर भनिन्छ) र केन्द्रीय Ethereum २.० blockchain (बीकन चेन भनिन्छ) को विकास;
चरण १: Ethereum २.० का क्षमताहरू मापन गर्नुहोस् नेटवर्कलाई block block blockchains (शार्ड चेन भनेर चिनिन्छ) मा विभाजन गरेर जसले नेटवर्कलाई अधिक लेनदेन प्रक्रिया गर्न अनुमति दिनेछ;
चरण २: स्मार्ट सम्झौताको क्षमताहरू सक्षम गर्नुहोस् जसले dApps लाई Ethereum २.० मा चल्न अनुमति दिनेछ, र मूल Ethereum नेटवर्क र Ethereum २.० बीच एक ब्रिज बनाउँदछ; र अन्तमा
चरण:: एथेरियमका संस्थापक भितलिक बुटरिनका अनुसार यो चरण "हामीले सुरु गरे पछि थप्न चाहेको अन्य कुरा गर्ने गर्दछ" तर वास्तवमा ईभीएम (इथरियम भर्चुअल मेसिन) को बदलाव होस्ट गर्नेछ।
अझै २०२० मा रिलीज हुन बाँकी छ, बीकन चेन इथरियम १.० सँगसँगै काम गर्ने योजना बनाइएको स्ट्याक नेटवर्कको प्रमाण हो। यो मात्र शुरू हुन सक्नेछ यदि ईथरमा 2020२1.0,२524.288। लाई स्टेक गरिएको छ, र कम्तिमा १,,16.384। नोडहरू वैधकर्ताहरूको रूपमा दर्ता गरिएको छ। प्रारम्भमा, बीकन चेन अधिकांश प्रयोगकर्ताहरूको लागि ठूलो परिवर्तन हुनेछैन। यो नेटवर्क Dapps होस्ट छैन र स्मार्ट सम्झौताहरु चल्दैन। यसको प्राथमिक कार्य जस्तै हुनेछ मान्यकर्ताहरूको लागि दर्ता र नेटवर्क भित्र तिनीहरूको भाग।
यो चरण चरण ० को अन्तीकरण पछि एक बर्षको लागि निर्धारित गरिएको छ। यस चरणमा, Ethereum १.० को एकल चेनलाई शार्ड भनिने सानो अंशमा काटिने छ। प्रारम्भिक सुरुवातमा शार्डको अपेक्षित संख्या number0हो। यो चरण धेरै नाजुक छ: यसले विशेष उप-चेनहरूमा प्रत्यक्ष लेनदेन गर्न अनुमति दिनेछ र अनुमति दिन्छ समानान्तर डाटा प्रोसेसिंग.
यस चरणमा कार्य संयन्त्रको पुरानो सबूतलाई नयाँ नेटवर्कमा शार्ड मध्ये एक, सब-चेन मध्ये एकको रूपमा समावेश गर्नुपर्छ। फलस्वरूप, यस चरणको साथ कुनै पनि क्षणमा त्यहाँ रेकर्डहरूलाई एउटा श्रृंखलाबाट अर्कोमा हस्तान्तरण गर्न आवश्यक पर्दैन। पीओडब्ल्यू चेनको लेनदेन ईतिहास ईथरम २.० को अंशको रूपमा प्रत्यक्ष हुनेछ। यो चरण १ पूरा भए पछि चाँडै हुनुपर्दछ।
यस चरणमा, दुई Ethereum १.० र Ethereum २.० चेनहरू मर्ज भएको केही समय पछि, Ethereum Virtual Machines प्रतिस्थापन हुनेछ। यस चरणको सम्बन्धमा त्यहाँ धेरै विवरणहरू छैनन्, तर नयाँ भर्चुअल मेसिनलाई Ethereum WebAsorses (EWASM) भनिन्छ, किनकि यो वेब सम्मेलन ढाँचामा आधारित हुनेछ।
यस अद्यावधिकको साथ, Dapp होस्टिंग र स्मार्ट सम्झौता कार्यान्वयन Ethereum २.० मा जोडले भरिनेछ। यसको मतलब यो हो कि हामी अपडेट समाप्त भएको मात्र न्याय गर्न सक्षम हुनेछौं जब ईथरियमले यो चरण पूरा गरेको छैन।
रोड लामो र घुमाउरो छ, तर नयाँ Ethereum २.० को क्षमताले धेरैको मुखमा पानी बनाएको छ। संसार परिवर्तन हुनेछ। यो एक प्रमुख अद्यावधिक हो जसले इथरियम प्रयोगकर्ताहरूलाई मात्र लाभ पुर्‍याउँदैन, तर भविष्यमा समग्रमा उद्योगलाई पनि चलाउने छ।
धेरैले विश्वास गर्छन् कि Ethereum मा Bitcoin लाई समात्न र पार गर्न सक्ने क्षमता छ। मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। यसको मतलब यसको २० गुणा मूल्यमा बढ्नु हो ... वैसे पनि:
BINANCE मा एथेरियम किन्नुहोस्, कमिशनमा २०% छुटको साथ
तपाई अझ राम्ररी बुझ्न चाहानुहुन्छ छुट कसरी काम गर्दछ?
तपाईं कसरी यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ Binance मा छूट को सबै भन्दा बनाउन.
अघिल्लो लेखइथरियम भनेको के हो?
अर्को लेखNFT रिपोर्ट: 2021 ठूलो वृद्धिको वर्ष हो